Malunga nathi -Shanghai Chunye Instrument Technology Co., Ltd.
EyoMqungu. 10, 2020
FOB, CIF, Lwemipu
Inkampani yethu ngamashishini aphakamileyo obuchwephesha abenza uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zokuhlaziya umgangatho wamanzi, isivamvo kunye ne-electrode. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zamandla, kwimveliso yepetrokhemikhali, kwimigodi yokunyibilikisa isinyithi, unyango lwamanzi okusingqongileyo, ishishini lokukhanya kunye nezinto zombane, imisebenzi yamanzi kunye nenethiwekhi yokuhambisa amanzi okusela, ukutya kunye nesiselo, izibhedlele, iihotele, ezolimo lwamanzi, ukulima okutsha kwezolimo kunye nenkqubo yokucoca .
Sibambe ixabiso "lobuNzululwazi kunye nobuchwepheshe, ukuphumelela ukusebenzisana, intsebenzo ethembekileyo kunye nophuhliso oluhambelanayo" ukukhuthaza inkampani yethu ukuya phambili nokukhawulezisa uphuhliso lweemveliso ezintsha. Inkqubo yokuqinisekisa umgangatho ngokungqongqo ukuqinisekisa umgangatho wemveliso; Indlela yokuphendula ngokukhawuleza ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Sibonelela ngeenkonzo zexesha elide, ezifanelekileyo kunye nezikhawulezayo zokucombulula iingxaki zabathengi. Inkonzo yethu ayinasiphelo ......
I-Shanghai Chunye Instrument technology Co, Ltd. ngumenzi wobuchwephesha kunye nomnikezeli wenkqubo yokusebenza kwezenzekelayo kunye nezixhobo, eyona mveliso iphambili: Multi-parameter, Turbidity, TSS, Ultrasonic Liquid Level, Sludge Interface, Fluoride Ion, Chloride Ion, Ammonium Nitrogen, I-Nitrate Nitrogen, Ukuqina kunye nezinye ii-Ion, i-pH / ORP, i-Oxygen echithakeleyo, ukuqhuba / ukuhlala kwakhona / i-TDS / Ubutyuwa, i-Chlorine yasimahla, i-Chlorine Dioxide, i-Ozone, i-Acid / i-Alkali / i-Salt Concentration, i-COD, i-Ammonia Nitrogen, iyonke i-Phosphorus, i-Nitrogen iyonke, i-Cyanide , Amatye anzima, ukuJongwa kweGesi yeFlue, ukujonga umoya, njl.Umkhiqizo: Uhlobo lwePen, ukuPhatheka, iLebhu, ukuGqithisela, iSensor kunye neNkqubo yokujonga inkqubo kwi-Intanethi.
Iminqweno emihle yeLuffy Chen yokuthengisa isebe
Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Ph woluvo Electrode, Isilumko seChlorophyll,